DevOps, ITIL & သွက်လက်လောကီသားတို့သည်အထိခိုက် - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
10 မာ 2017
ITIL & သွက်လက်, DevOps လောကီသားတို့သည်အထိခိုက်
DevOps, ITIL & သွက်လက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ
ပြောင်းလဲမှုကိုထိုနေ့၏တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်, ယခုမတိုင်မီဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူး, စီးပွားရေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပြောင်းလဲမှု၏ခြေလှမ်းမှာမြန်ဆန်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် client များပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နှင့်စီးပွားရေးပိုမိုတစ်ခုမက်လုံးပေးဖော်ပြကြောင်းန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်တတ်၏ထားတဲ့အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး, ပိုမိုပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုသိရှိစေရန်အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုပေးသွင်းဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ ITIL စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသယ်ဆောင်နှင့်ကြီးကြပ်များအတွက်စစ်မှန်တဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ Deft (ဥပမာ, Scrum လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအသုံးချဖို့) application များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အစီအစဉ်အရှိန်အဘို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ DevOps ဖြစ်နိုင်သည်ထိုကဲ့သို့သောလျင်မြန်သွက်လက်မဟာဗျူဟာများမှတဆင့်ပိုပြီးမှတ်သားဖွယ်အားသာချက်များနှင့်မြန်စီးအနင်းအသိအမှတျပွုနိုငျကွောငျးအလုပ်လုပ်ဘို့သီအိုရီသို့မဟုတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
DevOps ဟာ ITIL ဝန်ဆောင်မှုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းအဆင့်ဆင့်၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးကျော်ပါဝင်သည်။ လျှောက်လွှာဖှံ့ဖွိုးတိုး (သွက်လက်) ဝန်ဆောင်မှုပြောင်းရွှေ့မှတဆင့် ITIL ဝန်ဆောင်မှုအကြမ်းဖျင်းဖြတ်။ လျှောက်လွှာစီမံခန့်ခွဲမှုဟာ ITIL ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးတစျဆငျ့တတ်၏။ ဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆင်ရေးတသမတ်တည်းဝန်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုကတဆင့်ဝန်ဆောင်မှုအကြမ်းဖျင်းမှာစတင်သည်နေစဉ်။
DevOps သွက်လက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ accentuating နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လမ်း "တို့ပါဝင်သည်လေးစားမှု" တစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
အဆိုပြုထားဥတုအစီအစဉ်၏မှီပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုတိုင်ပင်ပြီးများအတွက်နည်းပညာနှင့်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်မှ operations အုပ်စုများပံ့ပိုးမှုများ
အသစ်သို့မဟုတ်တိုးမြှင်လျှောက်လွှာအသုံးဝင်မှုပြောင်းလဲမှုများစျေးကွက်မှ speedier အချိန်အားပေးဒီထုံးစံ၌ Enhanced အဖွဲ့အစည်းကိုထပ်မဖြစ်အောင်
အပြောင်းအလဲတစ်ခုစိတ်ပျက်မိကြောင်း၏အမှု၌အသစ်သောရိနာစွဲစိတ်ပျက်မှုနှုန်းပိုမိုအဆက်ဆက်အထစ်အချက်အလက်များပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် speedier recuperation အချိန်ခေါ်ခဲ့
ဥပမာအားပုံမှန် "ဖြစ်စဉ်ကိုမော်ဒယ်များရှငျစမှဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလယ်ယာ၏လျှောက်လွှာ, စံပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဥတုရဲ့ Refresh
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြှင့်စာပေးစာယူနှင့်စီးပွားရေးတုန့်ပြန်သောဤအတွေးအခေါ်များ ITIL မှပြင်ပတွင်မရှိကြပေ။ အမှန်မှာထို ITIL ဖွဲ့စည်းပုံမှာဝန်ဆောင်မှု technique ကို, ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအပြောင်းအရွေ့၏ကာလများတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လျှောက်လွှာစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးဝင်သောအုပ်စုများ၏အစောပိုင်းပါဝင်များအတွက်လိုအပ်ချက်အပေါ်အာရုံစိုက်။ ITIL ဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆင်ရေးစွမ်းရည်-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမူဘောင်အဖွဲ့များတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအခွအေနေရန်လျှောက်လွှာများ၏ထောက်ခံမှုနှင့်ကျန်းမာအပေါ်အကြမ်းဖျင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကိုစောစောအကြံပေးပေးဖို့အထူးသ-်၏ကွောငျးထငျရှားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာထိုနည်းတူဝန်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ, လျှောက်လွှာအင်ဂျင်နီယာ, ဒီဇိုင်းကိုစုစည်းပြီး, ဒေတာဒီဇိုင်း, ဒေတာဘေ့စအင်ဂျင်နီယာ et cetera အပါအဝင် "ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်," များအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာဒီဇိုင်းများအပေါ်ပံ့ပိုးမှုများပေးသင့်၏။
တပ်ဖွဲ့ချိတ်တွဲကို The Power of
လျှောက်လွှာစီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်းများ (အိမျတျော၌ created အားလုံး applications များ-မသာ၏တပြင်လုံးကိုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းတာဝန်ခံဖြစ်ခြင်းသူတို့အား) ဝန်ဆောင်မှု၏အသက်တာ၌အချိန်ပေါ်မှာ right အတွက်သော့ခတ်ခံရဖို့သင့်၏။ အမှန်တရားသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သူများဖြစ်သင့်၏, ပြောပြသည်ခံရ, တစ်ဦးချင်းစီ, အသိအမှတ်ပြုရန်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်မှတ်တမ်းတင်တစ်ခုလုံးကို "ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်" လိုအပ်ချက်နှင့်ဤဖမ်းမိနေကြသည်ကိုအာမခံဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးဦးစီးချုပ် (BRM) နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ထွက် doled ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်းသစ်ကိုသို့မဟုတ် Chang ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်၌တည်၏။
ITIL အားဖြင့်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းလျှောက်လွှာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များကိုမြန်ဆန်စွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အဆိုပါစုစုပေါင်းဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း applications များ၏ပေးပို့ခြင်းအပေါ်ဝန်ဆောင်မှုအကြမ်းဖျင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအပြောင်းအရွေ့များကြားတွင်ဗဟိုပြုကျန်ကြွင်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခိုင်နှင့်အတူရငျးနှီးလုပ်ကိုင်ဖို့သင့်၏။ လျင်မြန်သွက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး crosswise ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပြောင်းရွှေ့ကျော်လေ့ကျင့်ခန်းများအမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် concentrates, အကြမ်းဖျင်းနှင့်အပြောင်းအရွေ့ကတဆင့်နည်းစနစ်ကနေတပြင်လုံးကိုဝန်ဆောင်မှုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းကျော်လျှောက်လွှာနှင့်အတူလျှောက်လွှာစီမံခန့်ခွဲမှုအပေးအယူ (ဖှံ့ဖွိုးတိုးအတူလုပ်ကိုင်) နေစဉ်တွင်နှင့်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးများနှင့်မရပ်မနားပြောင်းလဲမှုသို့။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မှု (အပလီကေးများ) ကိုဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုကောင်းစွာ dispatches အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း client နှင့်ဖောက်သည်များ၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်တိုက်ရိုက်စစ်ဆင်ရေးများကြားတွင်ဖျော်ဖြေတတ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
DevOps ကဲ့သို့ပင် ITIL ထိုနည်းတူ "မော်ဒယ်များ" ၏အသုံးချနဲ့ productivity, အမြန်နှုန်းကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များချဲ့ထွင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလယ်ယာ၏လျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်. အလွန်အမင်း enthused ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကို ITIL ဖိစီးပါက may အဖြစ်အကြောင်း, ဒါကြောင့် Computerized ၏အများဆုံးအစွန်းရောက်အားသာချက်များကိုနားလည်နိုင်မီထိရောက်သောဖြစ်မည်ဟု, အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပထမဦးဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမောင်းနှင်ဖြစ်သင့်ကြောင်းလိမ့်မည်။ အဆိုပါစံပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ် "display ကို" ကိုထမ်းရွက်ပထမဦးဆုံးဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ဖြိုဖျက်ခံရသင့်ကြောင်း "crevices" ထဲကတူးယူရမည်ဖြစ်သည်, နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အ interfaces ထုတ်ခဲ့နှင့်စက်မှုလယ်ယာရမည်ဖြစ်သည်။ အတိအကျကြောင်းအမှတ်အများဆုံးအစွန်းရောက်အားသာချက်များကိုပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။
ITIL အိုင်တီများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းအကောင်းဆုံးခြစ်ခြစ်၏ဗဟိုကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ က may အဖြစ်, အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုပေးသွင်းခြင်းဖြင့်အကျိုးမပေးနိုင်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးနှင့် client ကိုနှင့်အတူအစီအစဉ်တိုးမြှင့်အားထင်ရှားပြီ DevOps-သွက်လက်နှင့်လည်း-အပါအဝင်အကောင်းဆုံးအပြန်အလှန်အလေ့အကျင့်ကိုခိုင်မာအောင်, အိုင်တီများ၏အရည်အသွေးနှင့်သေဒဏ်စီရင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများမြှင့်၏ throughput မြှင့်တင်ရန်ရမည်ဟု Be အစီးအနင်းများနှင့်အောက်ပိုင်းယေဘုယျအိုင်တီကုန်ကျစရိတ်။
ဤအချက်အပေါ် perusing စောင့်ရှောက်ရန်, ၏လမ်းဆုံသင်တန်းရှုမြင် DevOps နှင့် ITIL®.
ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်